Waammicha Ummata Oromoo Maraaf.
Mootummaan Oromiyya Heera Ethiopia fi Mirga Oromoof maluu faallaa hojeechaa jira.
Heeri Mootumma Ethiopia Keyati 49 lakkoobsa 5 irratti Finfinnen waan Oromiyya keessa jirtu fi lafa Oromoo waan tateef Tajaajila fi dhiiyeesii hunda Oromiyaa irra waan argatuuf Oromiyyan Finfinne irratti mirga qabdu fi fayidaa isheen argachuu qabduu kun ammoo balinan seeran mirkana’af jeedha. Mirga Oromiyyan Fifinnee irratti argachuu qabuu Qooratamee akka hojii irra oluu Oromiyyaan bara 2003/1995 koree tokko hundese ture, koree kana keessa wara jiran kessa Dhabba Dabalee, Ittigaafatama wajjira Dargaggoota yeeros (----- ----),fi Jamal Abaso kkf koreen ijaramee hojii isaa hanga ammatii hin xumure. Finfinnee keessatti Aannaa hunda keessatti mani barumsaa Afaan Oromoo banamee akka ijooleen Oromoo Afaan isaani baratan karoorii ba'ee sagantan ba’’e Ittiaanan Mootumma Nannoo Oromiyya obbo Dagafee Bulaa bu’uura isaa ebban banani turani. Kun utuu hin xumuramin hafee, haraa afaan Oromoo Finfinnee keessa ba’ee jira. Mirga Oromiyyaan Finfinne irratti qabachuu qabdu Heera Federala Ethiopian murteese TPLF hojii irra olchuu didee wagoota 23 ukamsee jira. Mirgi Oromoo Heeran keenameef kun hojii irra oluu utuu qabuu faallaa isaatuu dalagama jira. OPDOn yaakka Oromoo irratti dalagamuu caalisee ilaalaa jira, Ergamtoon ammoo Ergama TPLF kana raawwachisuuf wixifacha jiru. Uummani Oromoo kana caalisuu hin qabuu, TPLF kana dafee yoo dhaabbuu batee Ethiopian lafa dhiyootti Siriya ykn Libiya ta'uun ishee hin oluu.
Finfinnee lafa isaa Hanga Kara Gingoo Finfinnee marsuun ala hin darbuu ture. Siirna TPLF keesa utuma Oromiyyaa dhiibbun babalifacha jiru. Ammoo Seera atatama qoophesun Godiina Adda Oromiyya dhunfachuuf deemuu. Kana dura yaadi kun dhiyaatee Preezdantiin Oromiyyaa Obbo Alemayoo Atomsa goochaa kana waan mormeef dhabatee ture.. Obbo Alemayoo du’uu isaa sababefaachuun atataman lafa Oromoo gugurachuuf ergamtoon TPLF murasii OPDO keessa folacha jiru. Namoon kun wara mirgi Oromoo Finfinnee irratti akka egamuu dirqamiin kenameef ta’ee utuu jiru, garuu wara mirga Oromoo ukamsan ta’an argaman jiru. Oromoon bakka Jirtani Dirbaa Kuma, Dhaabbaa Dabale fi Abdulaziz Mohamad Godina Adda Oromiyya Gurgurachuun yakkaa isaan hojeecha jiran balalefachuu qabdu. Lafi Oromoo gara Finfinneetti ciituu hin qabu jeedhe namii morma ture Alemayoo Atomsa du’ee utuu Iji isaa hin buruqiini warii isaa sumii nyachisan ajeesan lafa Oromoo gurgurachuuf deemu Miseensoon OPDO Oromoo ta'aan kana dura dhabachuu qabu.
Wayyanen mirga Oromoo dhiibuu, lafa Oromoo samuu fi samsisuu, Afaan Oromoo dhiibuu, Beektoota Oromoo biyya ari'achuu Daldaltoota Oromoo Ashura heeduu akka kafalan goochun hiyoomsuu, baratoota Oromoo yunivarsitii keessa ari’uun akka Oromoon beekaa dhabuu goochuu, shamaran Oromoo biyya Arabati gurgurun Oromoon akka wal hin hooree goochu, Aannoolee Oromoo murani naannoo biraf keenun Oromoo xiiqeesuu, salphisuu hôjii goodhatan jiru. Kun ammoo Wayyanen of ishee kufsuuf of qoopheesuu ishee argisisa. Uummani Oromoo utuu mirgi isaa dhibamuu kana caalaa sagoo Tigire ittin batuu hin qabatuu. Oromoo TPLF of irra busuu qaba. Kun yoo ta’uu didee mootummaa mataa isaa dhabachuu qaba. Kana caalaa Nafxanya Haraa (Tigire) ykn Nafxanya moofa (Amhara) banee jirachuu hin dandeenyu.
Gaafi WFDO Paarlamaa Ethiopia keessatti kassa ture keessa inni tokko Umman Oromoo Naannoo Finfinnee Siirna Miniliki egale hanga haraati qabeenya isaa irra buqisun dhabachuu qaba kan jeedhu ture. Dhaabilee Oromoo tokko tokko ammo dhimmi akkasi yeroo ka’uu kun waan xixinoo dha kun Bilisumùmaa Oromoo dukka furmataa waan argatuuf amma wa'ee kana dhiphachuu dhifnee wa'ee Qabsoo Bilisumma qoofa irratti hojeechu qabna jeedhu. Kun siiri mitti. Wa'ee Qabsoo Bilisumma fi dursa keenanif irratti hojeechun gariidha. Garuu gaafa Bilisumman dhufee hunda siiresina jeene yeroo uummatii keenya lafa isaa irra buqa’uu fi afaan isaa fi enymaa isaa dhabamuu caalifnee ilaalun dogoggora. Kanaafuu Oromoon mirga isaa waan tokko dabarsee lachuu hin qabuu. Mirga isaa waan xuqamee irratti falmachuu qaba. Ummani Oromoo (Shawa ) Nannoo Finfinnee siirna Miniliki kasse hanga Haraatti mootummaa dhufuu hundan lafa isaa irra buqa’uun dhabachuu qaba, Oromoo naannoo Finfinee buqau'uf lafa isaa fi enyumaa isaa dhabuun Oromoon Ethiopia irra akka cituuf sababa ta’uu isaa hin oluu, Oromoon buqa’uu, xiiqachuu fi salphachuun dhabachuu qaba.
Dargaggoon Oromoo hundi, Baratoon Oromoo, Diasporan Oromoo, dhaabileen Oromoo fi hayuuleen Oromoo hundi goocha Diribaa Kumaa, Dhaabbaa Dabbalee fi Abdulalziz Mohamad fi Nafxanyoon OPDO keessa jiran lafa Oromoo gurguruuf yaalii isaan goodhan hundi atataman dhabsisun, namoon hojii faraa Oromoo hojeetan kun akka angoo irra buqa’aan fi adabaman goochun dirqama. Namoon kun maatii isaan dabalatee yaakka kanaaf akka gaafataman goochun murtesadha. Gummin Paarlamaa Oromoo TPLF/Nafxanyoon OPDO lafa Oromoo gurguruuf yaali isaan goodhan kara hunda dura dhabana TPLF wa'ee Finfinee babalisuu fi lafa Oromoo dhiibuuti yoo itti fufan waraa Ethiopian bakaa 5ti gargari kukutuf deeman waliin hojeechuuf kan dirqamnuu ta’uu isaa akka beektan Mootummaa wayyanee akkekachisuu feena. Ethiopian Miigri Oromoo dhiibduu jirachuu hin qabduu.
Bilisumman Uummataa Oromoof !!!